सलाम ! पहिलो दलित मेयर देवकुमारलाई | Nepal First Dalit Online News Portal: www.dalitonline.com
सलाम ! पहिलो दलित मेयर देवकुमारलाई
– उजिर मगर
मनोनयनको प्रक्रिया शुरु हुँदासम्म एमालेले ढोरपाटनमा मेयर, उप–मेयरको उम्मेदवार पाएकै थिएन। वाम तालमेलबाट जानुपर्छ भन्ने उसको पहल थियो। माओवादीको घमण्ड, जनमोर्चाको जडले गर्दा त्यो हुन सकेको थिएन। बागलुङ जिल्लामा वाम तालमेल एक प्रकारले अनिश्चित बन्दै गएको थियो। त्यहीबेला एकाएक देवकुमार एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर वैशाख २० गते उम्मेदवार बन्न पुगे। यहाँनेर प्रश्न उठ्छ राजनीति कति गरेकाले चुनाव जितिन्छ ? यसको जवाफ सरल छैन। यी सबै विषयको पृष्ठभूमिमा देवकुमार उदाएका छन्। राजनीतिमा अन्तिम छिनोफानो मतदाताले नै गर्ने हुन्। त्यसमा उनी विजयी बनेका छन्। उनका विभिन्न किसिमका पृष्ठभूमि रहँदारहँदै पनि समृद्ध ढोरपानका लागि नवनिर्वाचित मेयर देवकुमार नेपालीलाई बधाई !